Ònye Bụ Gọg nke Megọg?
GỤỌ NKE Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mixe Mongolian Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
Kemgbe ọtụtụ afọ, akwụkwọ anyị na-ekwu na Gọg nke Megọg bụ aha e nyere Setan bụ́ Ekwensu mgbe a chụpụchara ya n’eluigwe. Ihe mere e ji kwuo otú ahụ bụ na akwụkwọ Mkpughe kwuru na ọ bụ Setan ga-abụ onyeisi ndị ga-alụso ndị Chineke ọgụ n’ụwa niile. (Mkpu. 12:1-17) N’ihi ya, anyị cheburu na Gọg bụ aha ọzọ a kpọrọ Setan n’amụma ahụ e buru.
Ma, e nwere ajụjụ ụfọdụ e kwesịrị ichebara echiche banyere ihe ahụ a kọwara. Maka gịnị? Chegodị echiche: Mgbe Baịbụl na-ekwu banyere oge a ga-ebibi Gọg, Jehova kwuru banyere Gọg, sị: “M ga-ewere gị nye nnụnụ na-eri anụ, ụdị nnụnụ ọ bụla, na anụ ọhịa ka ị bụrụ nri ha.” (Ezik. 39:4) Jehova sịkwara: “Ọ ga-erukwa n’ụbọchị ahụ na m ga-enye Gọg otu ebe n’ebe ahụ, ya bụ, ebe ili ozu n’Izrel . . . Ọ bụkwa n’ebe ahụ ka a ga-eli Gọg na ìgwè ndị agha ya niile.” (Ezik. 39:11) Ma, olee otú ‘nnụnụ ndị na-eri anụ na anụ ọhịa’ ga-esi rie Setan ebe ọ bụ mmụọ? Olee otú a ga-esi ‘lie’ ya n’ụwa? Baịbụl mere ka o doo anya na a ga-atụba ya n’abis ruo otu puku afọ, ọ bụghị na a ga-eri ya ma ọ bụ lie ya.—Mkpu. 20:1, 2.
Baịbụl kwuru na a ga-atọpụ ya ma otu puku afọ ahụ gachaa, na “ọ ga-agakwa ka o duhie mba ndị dị na nkuku anọ nke ụwa, bụ́ Gọg na Megọg, ka o wee kpọkọta ha maka ibu agha ahụ.” (Mkpu. 20:8) Oleekwanụ otú Setan ga-esi duhie Gọg ma ọ bụrụ na ọ bụ yanwa bụ Gọg? N’ihi ya, “Gọg” e kwuru okwu ya n’akwụkwọ Ezikiel na Mkpughe abụghị Setan.
Ònyezi bụ Gọg nke Megọg? Iji zaa ajụjụ a, anyị kwesịrị ịchọpụta onye Baịbụl kwuru ga-alụso ndị Chineke ọgụ. Baịbụl ekwughị naanị banyere ọgụ ‘Gọg nke Megọg’ ga-alụso ndị Chineke, kama o kwukwara banyere ọgụ “eze ugwu” na ‘ndị eze ụwa’ ga-alụso ha. (Ezik. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Mkpu. 17:14; 19:19) Ihe a ọ̀ bụ ọgụ dị iche iche? Ọ dị ka ọ bụghị. Ọ dị ka ọ̀ bụ otu ọgụ ahụ ka Baịbụl kpọrọ aha dị iche iche. Gịnị mere anyị ji kwuo otú ahụ? Ọ bụ n’ihi na Baịbụl gwara anyị na mba niile nke ụwa ga-eso lụso ndị Chineke ọgụ ikpeazụ a ga-eme ka agha Amagedọn malite.—Mkpu. 16:14, 16.
Mgbe anyị tụlere amaokwu Baịbụl ndị kwuru banyere ọgụ ikpeazụ a ga-alụso ndị Chineke, o doro anya na Gọg nke Megọg abụghị Setan. Kama, ọ bụ ọtụtụ mba ndị gbakọrọ aka ọnụ. Ọ̀ bụ “eze ugwu” ga-edu ha? Anyị amaghị. Ma, o yiri ka ọ ga-abụ ya n’ihi ihe Jehova kwuru banyere Gọg. Ọ sịrị: “Ị ga-esi n’ala gị bịa, site n’ime ime ebe ugwu, gị na ọtụtụ ndị so gị. Ha niile na-agba ịnyịnya. Ha bụ ìgwè mmadụ, ee, ọtụtụ ndị agha.”—Ezik. 38:6, 15.
Daniel onye amụma, bụ́ onye ya na Ezikiel dịkọrọ ndụ, kwuru banyere eze ugwu, sị: “A ga-enwe akụkọ ga-enye ya nsogbu, nke ga-esi n’ebe ọwụwa anyanwụ na ebe ugwu, ọ ga-ejikwa ọnụma gawa ka o kpochapụ ọtụtụ ndị ma laa ha n’iyi. Ọ ga-amakwa ụlọikwuu ya nke dị ka obí eze n’agbata nnukwu oké osimiri na ugwu nsọ nke Ihe Ịchọ Mma; ọ ga-abịarukwa ọgwụgwụ ya, ọ dịghịkwa onye ga-enyere ya aka.” (Dan. 11:44, 45) Ihe a bụ nnọọ ụdị ihe akwụkwọ Ezikiel kwuru na Gọg ga-eme.—Ezik. 38:8-12, 16.
Gịnịzi ga-eme ma a lụsochaa ndị Chineke ọgụ ikpeazụ? Daniel gwara anyị, sị: “N’oge ahụ, Maịkel [bụ́ Jizọs Kraịst] ga-ebili [n’Amagedọn], bụ́ nnukwu onyeisi ahụ nke guzo ọtọ [kemgbe afọ 1914] n’ihi ụmụ ndị gị. A ga-enwekwa oge ahụhụ [ya bụ, oge oké mkpagbu] nke a na-enwetụbeghị kemgbe e nwere mba ruo n’oge ahụ. N’oge ahụ, ndị gị ga-alanahụ, onye ọ bụla e dere aha ya n’akwụkwọ.” (Dan. 12:1) Mkpughe 19:11-21 kọkwara na Jizọs, bụ́ onye nnọchiteanya Chineke, ga-eme ụdị ihe a.
Ma ònye ka a kpọrọ “Gọg na Megọg” ná Mkpughe 20:8? Ọ bụ ndị niile nupụụrụ Jehova isi ma lụso ndị na-efe ya ọgụ mgbe a ga-ele ụmụ mmadụ ule ikpeazụ ná ngwụcha otu puku afọ ahụ. Ha ga-egosi na ha nwere ụdị obi ọjọọ ahụ ‘Gọg nke Megọg’ nwere, ya bụ, mba ndị ahụ ga-alụso ndị Chineke ọgụ obere oge tupu Amagedọn amalite. Otú ahụ e bibiri mba ndị ahụ n’Amagedọn ka a ga-ebibikwa Gọg na Megọg. (Mkpu. 19:20, 21; 20:9) N’ihi ya, ọ dabara adaba na a kpọrọ ndị ahụ niile nupụụrụ Chineke isi ná ngwụcha otu puku afọ ahụ “Gọg na Megọg.”
Ebe ọ bụ na anyị na-amụsi Okwu Chineke ike, anyị na-atụsi anya ike ịmata onye ga-abụ “eze ugwu” ahụ n’ọdịnihu. N’agbanyeghị onye ga-edu mba niile lụso ndị Chineke ọgụ, ihe abụọ doro anyị anya bụ: (1) A ga-emeri Gọg nke Megọg na ndị agha ya, bibiekwa ha. (2) Eze anyị bụ́ Jizọs Kraịst ga-azọpụta ndị na-efe Chineke, meekwa ka ha baa n’ụwa ọhụrụ, bụ́ ebe ha ga-ebi n’udo, obi eruokwa ha ala.—Mkpu. 7:14-17.